Race 3 kadib: Salman Khan, Anil Kapoor, Bobby Deol maxaa u diyaarsan ama ku mashquuli doonaan – Filimside.net
Race 3 kadib: Salman Khan, Anil Kapoor, Bobby Deol maxaa u diyaarsan ama ku mashquuli doonaan
June 26, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: June 26, 2018
Filimka Race 3 wuxuu noqday mashruuc guuleestay balse heerkii aan laga fileyn gaarin madaama sheekadiisa aad u liidato dhaliil xoogana loo soo jeediyay qaabka la isugu daba riday.
Haddaba hogaamiyaasha Race 3 iyo mashaariicda kale oo ay ku mashquuli doonaan ayaa lasoo bandhigay madaama mid walbo horey kaga sii socon doono fashiilkii Race 3:
Salman Khan: 52-jirkan waa Superstar-ka Bollywood-ka ugu mashquulka badan mana u hakan doono fashilkii Race 3 madaama ku dhawaad lix mashruuc oo kala duwan u diyaarsan yihiin.
Filimka Bharat ayuu dhawaan duubis ku bilaabi doonaa waxaana la daawan doonaa Eid 2019, kadib waxaa u xigi doono Dabangg 3 oo uu duubis ku bilaabayo, Kick 2 ayaa sii xigi soono sidoo kale Sohail Khan filimkiisa Sherkhan iyo Directoro Sanjay Leela Bhansali filimkiisa xiga uu sameyn doono, ugu dambeyntiina Director Remo D’Souza filimkiisa Dancing Dad uu horey u saxiixday.
Anil Kapoor: 61-jirkan maba duqoobo mana ka caajiso hawlihiisa waxaa 3 Aug u diyaarsan filimka Fanne Khan oo ay Aishwarya Rai Bachchan isla jilayaan, kadib waxaa bisha October ee isla sanadkan usoo bixi doono filimka Ek Ladki Toh Aisa Laga oo ay gabadhiisa Sonam isla jilayaan sidoo kalena 1 Dec 2018 waxaa u diyaarsan filimka shactirada badan ee la isugu yimid Total Dhamaal, kadibna wuxuu ka hawl gali doonaa Director Abhinav Bindra filimkiisa.
Bobby Deol: wuu soo laabtay xidigaan haatan mashquul xoogan ayuu dhexda kaga jiraa Race 3 kadib taxanayaal kale oo caan ah ayuu kasoo muuqan doonaa sida Yamla Pagla Deewana Phir Se oo la daawanayo 15 Aug iyo Housefull 4 oo uu dhawaan ka hawl gali doono lana daawan doono Diwali 2019 sidoo kalena Salman Khan ayaa filim Action mada daalo dhameestiran leh Prabhu Deva Director ka yahay u qarash gareyn doono.
Jacqueline Fernandez: xidigtaan laga daba dhacay Race 3 kadib waxay ku mashquuli doontaa xayeysiin u sameynta filimka Drive oo ay isla jilayaan Sushant Singh Rajput oo la daawan doono 7 Sep 2018, kadibna Salman Khan ayay la sameyn doontaa filimada Kick 2 iyo Dancing dad.
Waxaa Aqrisay 695